🥇 ▷ Xiaomi POCOPHONE F1 waxay sii wadaa inay la yaabto: faahfaahinta kamaradaha, furitaanka wejiga iyo qiimo xad dhaaf ah ✅
Xiaomi POCOPHONE F1 waxay sii wadaa inay la yaabto: faahfaahinta kamaradaha, furitaanka wejiga iyo qiimo xad dhaaf ah
Liigista POCOPHONE F1, Telefishanka casriga ah ee ‘Xiaomi’ oo loo dejiyey inuu noqdo horudhaca aalado cusub oo kala duwan, si loo taageero taxanaha taariikhiga ah ee Mi iyo Redmi. Markan waa u dhaqaaqistiisa qeybta shahaadada ee Bluetooth si loo muujiyo faahfaahin cusub oo xiiso leh.
Marka lagu daro taageerada dhimista ee loogu talagalay Bluetooth 5.0, in ka badan tixraacyada cad ee qeybta sawirkeeda waxay ka muuqdeen dukumiintiyada shahaadada: the laba kamaradaha gadaal waa inuu ka koobnaadaa qalabka weyn 12 megapixels, oo ay qoreen dugsi sare oo ka socda 5 megapixels, oo leh ‘pixels ka 1.4 µm waa dual pixel autofocus. Kaameerada hore waxay ahaan laheyd mid wanaagsan 20 megapixels oo ku faana tikniyoolajiyad la yiraahdo superpixel, kaas oo isku daraya macluumaadka 4 pixels hal pixel weyn, oo loogu talagalay qulqulka weyn ee iftiinka sidaa darteedna buuq yar.
AKHRISO: Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Xiaomi POCOPHONE F1 ayaa la daadiyay
Gudaha feejignaan safka hore, si balaadhan u ruxmay waayihii la soo dhaafay, markaa waa la dhisi lahaa a nalka iftiinka iyo mid kamarad infakshan leh, aalado loo baahan yahay si loo hubiyo furitaanka aaminka ah Garashada wajiga waxtar badan xitaa xaaladaha iftiinka hooseeya. Ugu dambeyntiina, qoraal cusub oo ku saabsan qiimaha: maalmo kahor Roland Quandt ayaa ka hadlay qiimaha laga bilaabo € 420 Yurubta Bari, laakiin hadda wuxuu sii hagaajiyay saadaasha xagga hoose. POCOPHONE F1 xitaa wuu ku kici karaa wax ka yar 390 €, qiimo si aad u tidhaahdid waalashada ugu yar ee suuqyadeena, tixgalinta Snapdragon 845 iyo xusuusta ayaa jaray 6/64 GB ee nooca aasaasiga ah.
Marka. Pocophone F1 xitaa wuu ka raqiisan yahay sidii aan horay u sheegay. Ganacsadaha Reer Bari ee Bariga Yurub wuxuu heystaa wax ka yar 390 Euro – oo u muuqda mid waalan, haddii runtii uu adeegsanayo SDM845.
Via: / FasaxXigasho: Bluetooth